ပထမ သုံးလပတ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၀ တ်ဆင် နိုင်သော ပစ္စည်း တင်ပို့မှု သည်တစ် နှစ်နှင့် တစ်နှစ် ၇ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်း ခဲ့သည် - Pandaily
ပထမ သုံးလပတ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၀ တ်ဆင် နိုင်သော ပစ္စည်း တင်ပို့မှု သည်တစ် နှစ်နှင့် တစ်နှစ် ၇ ရာခိုင်နှုန်း ကျဆင်း ခဲ့သည်
Jun 10, 2022, 20:37ညနေ 2022/06/10 23:09:52 Pandaily
အရIDC က ထုတ္ဴပန္ တဲ့ အစီရင္ခံစာ မႀာသောကြာ နေ့တွင် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ၀ တ်ဆင် နိုင်သော ပစ္စည်း တင်ပို့ မှုသည် ၂၅. ၈၄ သန်း ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၇. ၅% ကျဆင်းခဲ့သည်။
အထူးသဖြင့် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလပတ်တွင် နားကြပ် များ တင်ပို့ ရောင်းချ မှုသည် ယူနစ် ၁၅. ၉၆ သန်း ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၃. ၅% တိုးလာပြီး ကြိုးမဲ့ နားကြပ် များ တင်ပို့ ရောင်းချ မှုသည် တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် တိုးတက်မှုနှုန်း ၃. ၂% ရှိခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့် နှစ်ကုန် ပိုင်းတွင် အရောင်း မြှင့်တင်ရေး ကာလအတွင်း ၀ ယ်လိုအား လွန်ကဲ ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်း လုပ်ငန်း အဆင့်မြှင့်တင် မှုများ ကန့်သတ် ခြင်းနှင့် အချို့ ဒေသများတွင် ကပ် ရောဂါ ပျံ့နှံ့ ခြင်းစသည့် အ ချက်များသည် ရောင်းအား တိုးတက်မှု နှေးကွေး စေခဲ့သည်။
၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ပထမ သုံးလ ပတ်အတွင်း နာရီ တင်ပို့ ရောင်းချ မှုသည် ၇ သန်းကျော် သာ ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၁၅. ၃% ကျဆင်းခဲ့ပြီး အရွယ်ရောက် နာရီ ၃. ၈၆ သန်းနှင့် ကလေး နာရီ ၃. ၃ သန်း တို့ပါဝင်သည်။ ဒီ သုံးလပတ် မှာ နာရီ ထုတ်လုပ် သူတွေဟာ ရုပ်သံလိုင်း စာရင်း ကိုအကောင်းဆုံး ဖြစ်အောင် အာရုံစိုက် ပြီး ဒီ နွေရာသီ မှာ ၆ ၁၈ စျေးဝယ် ပွဲတော် မြှင့်တင်ရေး အတွက်ပြင်ဆင် နေပါတယ်။ ထို့အပြင် ပြင်ပ လှုပ်ရှားမှုများ ကိုကန့်သတ် ခြင်း သည်ပထမ သုံးလပတ်တွင် တင်ပို့မှု ကျဆင်းခဲ့သည်။
ပထမ သုံးလ ပတ်အတွင်း တီးဝိုင်း မှ ယူနစ် ၂. ၆၃ သန်း တင်ပို့ ခဲ့ပြီး တစ်နှစ် ထက် တစ်နှစ် ၃၃. ၆% ကျဆင်းခဲ့သည်။ တီးဝိုင်း စျေးကွက် သည်ပိုမို ကျယ်ပြန့်သော စက်မှုလုပ်ငန်း ယှဉ် ပြို င်မှု၊ ကပ် ရောဂါနှင့် အော့ ဖ် လိုင်း ထုတ်ကုန် အသစ် များ၏ အလားအလာ များ ကြောင့်ဖြစ်သည်။
လက်ရှိ motor လုပ်ဆောင်ချက် တွေအပေါ် အခြေခံပြီး ဝတ်ဆင် နိုင်တဲ့ ပစ္စည်း တွေအတွက် ကျန်းမာရေး စောင့်ကြည့် မှုနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် တွေက တဖြည်းဖြည်း တိုးတက် လာတယ်လို့ IDC က ဆိုပါတယ်။ ထို့အပြင် ၎င်းတို့တွင် ဂိမ်း များတွင် VR ကဲ့သို့သော ကိရိယာ များနှင့် အပြန်အလှန်ဆက်သွယ် ခြင်းနှင့် ယာဉ်မောင်း အခြေအနေ ကိုစောင့်ကြည့် ခြင်းစသည့် စူးစမ်း လေ့လာရန် ပိုမို ကျယ်ပြန့်သော အသုံးပြု မှုများရှိသည်။
အားကစား နာရီ များ၊ ကြိုးမဲ့ နားကြပ် များနှင့် ဆူညံသံ လျှော့ချ သည့် နားကြပ် များသည် လွန်ခဲ့သော သုံး နှစ်အတွင်း ဝတ်ဆင် နိုင်သော စျေးကွက် ၏ လျင်မြန်စွာ ကြီးထွား မှုအတွက် အထောက်အကူပြု ခဲ့သည်ဟု IDC China မှ သုတေသန အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Pan Xuefei က ယုံကြည်သည်။ တစ်ဖက် တွင် စျေးကွက် သည် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နေရာချထား ခြင်းဖြင့် တိုးတက်မှု သံသ ရာကို တတ်နိုင်သမျှ တိုးချဲ့ ရန်လိုအပ် ပြီး အခြားတစ်ဖက် တွင် ၎င်းသည် တိုးတက်မှု new ရိယာ အသစ်များ ကိုဆက်လက် လေ့လာ ရန်လိုအပ်သည်။
Startups Jan 26 ဇန်နဝါရီ 26, 2022
Gadgets Mar 25 မတ် 25, 2021